Ama-chondroprotectors amahle kakhulu ezinja ukuqinisa amalunga | Izinja Umhlaba
USusana godoy | | Izifo
Sihlale siyazi kakhulu impilo yezilwane zethu. Ngakho-ke, namuhla kufanele sikhulume ngefayela le- ama-chondroprotectors ezinja, ngoba yize singanikezwa kakhulu njalo imithi, akukho okufana nokubheka izithako zemvelo kakhulu ukuze zikusize uzizwe ungcono.
Njengoba sazi kahle, kunezinye izifo ezingenakugwenywa, noma singathanda, kepha lokho kungaba yinto ejwayelekile. Ngakho-ke, Isikhathi sokuzama ukunciphisa imiphumela yazo futhi lapho kusebenza khona ama-chondroprotectors ezinja ezisikhathazayo namuhla. Ngabe ufuna ukwazi konke ngabo?
1 Yini i-chondroprotector
2 Ingabe kuhle inja yami ukuthatha ama-chondroprotectants uma ingenaso isifo esihlangene?
3 Lapho izifo i-chondroprotector isiza izinja
4 Izinhlobo ezinhle kakhulu ze-chondroprotectors zezinja
5 Ingabe ama-chondroprotectors ezinja anemiphumela emibi?
6 Ungayinikeza kanjani inja yami ama-chondroprotectors
7 Ngabe ama-chondroprotectors asebenzela izinja?
8 Ungawathenga kuphi ama-chondroprotectors ashibhile wezinja
I-Ecuphar Cosequin DS ...
Ukunakekelwa kweCosequin SE506111 ...
ICosequin DS HA MSM 120 -...
I-Cosequin 00.1415.00 Ultra ...
Ukunakekelwa kweCosequin SE506115 ...
I-Cosequin 00.1420.00 Qala ...
Singasho ngabo ukuthi bangangezelela yemvelo noma isengezo sokudla esihlose ukwenza ngcono i-hydration ngenkathi sondla uqwanga. Ukuze amalunga azoklonyeliswa, aqine futhi avikelwe, njengoba njengoba sishilo ngaphambili, kungaba ngesinye sezifo ezivame kakhulu ezinjeni eziningi.
Lokho kusho, futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi inganciphisa noma ilawule izifo ezifana ne-osteoarthritis. Okuthile okungaholela ekukhubazekeni, ekulahlekelweni ukuhamba noma ekuqineni futhi okufanele kulashwe noma kuvinjelwe ngokushesha okukhulu, yingakho izithako zemvelo nazo zibalulekile ezimweni ezinjengalezi.
Ingabe kuhle inja yami ukuthatha ama-chondroprotectants uma ingenaso isifo esihlangene?
Iqiniso ngukuthi yebo. Ngoba ngakolunye uhlangothi sesivele siphawule ukuthi zingama-supplements emvelo, ngakho-ke ngeke zibe nemiphumela empilweni yezilwane ezifuywayo, kepha zihluke kakhulu ngoba zizobasiza ukuthi bahlale bephilile. Kungaphezulu, uma ungenaso isifo esihlanganyelwe sohlobo oluhlangene, ngaso sonke isikhathi kungcono ukuvimbela.
Uma inja yakho iwuhlobo olukhulu, zivame ukuba nezinkinga ezihlangene eziningi, ngokufana nokuthi zikhuluphele ngokweqile noma ziye zaba nohlobo oluthile lokulimala esikhathini esedlule. Amacala afana nalawa angaba nezinkinga ezinkulu ngokuzayo futhi ngakho-ke, ukuvimbela kungcono ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, ama-chondroprotectors ezinja akayona imishanguzo kepha isengezo.
Lapho izifo i-chondroprotector isiza izinja
I-hip dysplasia: Uma izinja zikhula zingaba nenkinga efana nalena futhi lokho kungadala ukungazinzi, kanye nobuhlungu.
Izinkinga zamadolo: Ezinye zezinto ezivame kakhulu ukulinyazwa kwamadolo noma ukulimala kwemisipha.
Ngemuva kokuhlinzwa: Kuyadingeka futhi ukululama ngokushesha, kuhlanganiswe namasu okuvuselela, okuzophakanyiswa udokotela wezilwane.
Isifo samathambo: Lapho amalunga eguga, ubuhlungu bukhulu kakhulu futhi abupheli, ngakho-ke i-chondroprotector yezinja inganciphisa lezi zimpawu.
Isifo samathambo: Futhi kuhlotshaniswa nokuvuvukala okuhlangene nokuthi iziphi izithako nazo ezizobaluleka kakhulu.
Isifo samathambo: Sike sasho phambilini futhi yisifo esijwayeleke kakhulu esihlangene. Ngalesi sifo ukungezelela kuyalwa.
Izinhlobo ezinhle kakhulu ze-chondroprotectors zezinja
Yize singathola eminye imikhiqizo eyaziwa kangcono kubo bonke, kuyiqiniso ukuthi iCosequin nayo yenza indawo phakathi kwama-chondroprotectors afunwa kakhulu izinja. Kubukeka kunenhloso enhle iyonke kepha ikakhulukazi ngalezo zinja ezikhuluphele ngokweqile noma asebevele beneminyaka ethile. Ngaphezu kokuvimbela ukugqoka uqwanga nezinye izinkinga ezihlangene.
I-Bioiberica Condrovet ...
Ingenye yokusetshenziswa kakhulu ngoba kuyiqiniso ukuthi futhi ingenye yezinto ezaziwa kakhulu yibo bonke. Kulokhu ibilokhu isetshenziswa ukwelapha ukulimala. Kwezinye izimo nje ukulimala okuluhlobo oluthile kodwa kokunye okuningi okuba okungapheli. Imvamisa banemibono emihle kakhulu uma kukhulunywa ngemiphumela. Ngaphezu kokuqukethe uvithamini E.
I-Flexadin Advanced ...
Sesibonile ukuthi kujwayelekile ukuthi izinja zethu zihlakuleke ngamathambo futhi uma udokotela wakho omethembayo ekutshela ukuthi i-osteoarthritis ingangena empilweni yakho nganoma yisiphi isikhathi, udinga isengezo esinjengalesi. Ngoba ukwakheka kwayo kuhluka kakhulu futhi lokhu kukusiza ukuvikela noma ukuthuthukisa imiphumela yesifo.
Imijaho ye-Farmadiet Hyaloral ...
Asikwazanga ukushiya lo omunye u-chondroprotector wezinja ezisepayipini. Ngoba kulokhu akuyona nje imibono enikeza amaphuzu amahle kepha futhi kunezifundo ezibonisa ukusebenza kwayo. Ngaphezu kwalokho siphinde siqokomise ukunambitheka kwayo, okujabulisa kakhulu izilwane zakho ezifuywayo.
Ingabe ama-chondroprotectors ezinja anemiphumela emibi?
Ngokubanzi, singathi cha. Ama-chondroprotectors ezinja ajwayele ukuba nemiphumela engemihle. Kepha yebo, ngaso sonke isikhathi kufanele uqaphele kancane kwezinye izimo ezithile. Ngokuba ne-glucosamine phakathi kwezithako zayo, kungakhuphula ubungozi be-glaucoma. Uma inja yakho inesifo sikashukela kuyadingeka ukuthi ubonane nodokotela wezilwane. Kuyadingeka futhi ukuthi uthintane nayo uma uthola ukungezwani kokudla, ngoba lokhu kungasebenzisana nanoma yiziphi izingxenye zesengezo okukhulunywa ngaso. Kwezinye izimo, kepha kucaciswe kakhulu, isifo sohudo noma ukuhlanza sekuchaziwe kepha akuphikisi.
Ungayinikeza kanjani inja yami ama-chondroprotectors
Iqiniso ukuthi uma kukhulunywa ngefomethi yamaphilisi, lingakhululeka kancane, kwezinye izimo. Ngoba akuzona zonke izinja ezingabangane bokuthatha umuthi. Ezinye zalezi zithasiselo sezivele zizwakala kamnandi ukuze uzithokozele. Kepha kuyiqiniso ukuthi yenanoma okungcono ukukuxuba phakathi kokudla.
Umkhiqizo ngamunye oqondile uzoletha izinyathelo zawo ukuze ukwazi ukunikeza isilwane sakho i-chondroprotector. Kepha ngokujwayelekile singakutshela lokho inani lalo lizoya ngesisindo isilwane sakho. Ngalesi sizathu, izinja ezinesisindo esiphakathi kuka-5 no-10 kilos zingathatha okuyingxenye yethebhulethi usuku ngalunye. Uma uzuza amakhilogremu ayi-10 khona-ke yebo singaqhubeka sibanikeze ithebhulethi nsuku zonke. Kepha njengoba sisho, ukuqiniseka, akukho okufana nokufunda okufakiwe kwephakeji noma ukuxhumana nodokotela wezilwane.
Ngabe ama-chondroprotectors asebenzela izinja?
Khumbula ukuthi akuyona indlela yokwelapha uqobo, kepha kunalokho isengezo esingavikela futhi sinakekele izinkinga ezizayo ezifuywayo zethu. Ngakho-ke, ngokuthembela kuyo, lapho ngiqala ukunikeza ama-chondroprotectants enja yami ngenxa yokukhuluphala nokuba nezinkinga ezihlangene ngabona ukuthi kuyasebenza ngempela. Kuyiqiniso ukuthi akuyona into eyisimangaliso kusuka osukwini olulodwa kuya kolandelayo, kepha uyayibona imiphumela. Endabeni yokukhuluphala ngokweqile, eminye imihlahlandlela nayo kufanele ilandelwe ukwenza ngcono lesi simo, kepha i-chondroprotector iyasiza ukuthuthukisa amandla abo noma leyo mikhawulo engokomzimba abayithola ngenxa yokuhamba kwesikhathi noma izinkinga zempilo. Esilwanyaneni sami kwakukhona ushintsho, kushiya ngemuva izinkinga ezithile zokuhamba nokuba nemizwa engcono.
Ungawathenga kuphi ama-chondroprotectors ashibhile wezinja
Amazon: Yize kungukuthenga okuhle kakhulu, kufanele futhi kushiwo ukuthi singathola izinhlobo ezahlukahlukene, ezaziwa kakhulu nalabo abanezilinganiso ezinhle kakhulu. Lokhu kwenza ukukhetha kwakho kuhlale kufanelekile futhi, nge amanani ancintisana kakhulu emakethe. Njengoba lezi zinhlobo zezithako ezingaziwa zishibhile ngempela.
kiwiko: Ingesinye sezitolo zezilwane ezihamba phambili futhi ngenxa yalokho, zinama-chondroprotectors ezinja. Banemikhiqizo eminingana futhi, ngamanani ahlukahlukene kulowo nalowo wabo, ngakho-ke ungakhetha ngokuya ngezidingo zakho. Enye yezindlela ezinhle kakhulu okufanele sikwazi ngazo ukuvikela ezethu ezinoboya.
UKimipharma: Futhi izithasiselo zezilwane zifika eKimipharma futhi ngokungeziwe, uzokwazi ukukujabulela amanani angabizi kakhulu, okuzokuvumela ukuthi unikeze okungcono kakhulu ezifuyweni zakho ngaphandle kokukhokha ngaphezulu. Njengoba indlunkulu yayo isePortugal, ingesinye sezitolo ezihlonishwa kakhulu eminyakeni yamuva, ngenxa yokuthuthukisa izinga lempilo.
Tendenimal: E-Tíanimal uzothola ama-supplements kusuka kumanani aphansi impela kulokho esasinakho engqondweni. Izinhlobo ezahlukahlukene ngefomethi yephilisi ukuze ukwazi ukukunikeza ngendlela enethezeke kakhudlwana ezifuyweni zakho. Ngaphezu kwalokho, ngokuphepha okuphelele nokuzethemba kwesitolo esinjengalesi.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Ama-chondroprotectors ezinja
Ama-cones angcono kakhulu ezinja nezinye izindlela zazo